डिलक्स न्यु योर्कको साम डेलले रंगीबेरंगी कन्ट्रास्ट ल्याए "छिमेकीको सुन्दर दिन" - एनएबी कार्यक्रम न्यूज शोको आधिकारिक प्रसारणकर्ता बीट, एनएबी कार्यक्रम लाइभ प्रसारण
घर » समाचार » डिलक्स न्यु योर्कको साम डेलले रंगीबेरंगी कन्ट्रास्ट ल्यायो "छिमेकीको सुन्दर दिन" लाई।
डिलक्स न्यु योर्कको साम डेलले रंगीबेरंगी कन्ट्रास्ट ल्यायो "छिमेकीको सुन्दर दिन" लाई।
"नेबरहुडमा एक सुन्दर दिन" अमेरिकी आइकन फ्रेड रोजर्सको रूपमा टिम ह्या over्क्सले तारिफवादमाथि विजयी दयाको कहानीमा अभिनय गरे। पत्रकार टोम जुनोदद्वारा लेखिएको "के तिमी भन्न सक्छौ ... हीरो?" लेखबाट प्रेरित यस फिल्मको मारीएल हेलरले निर्देशन गर्नुभएको हो, जोडी ली लिप्सको सिनेमाटोग्राफी र डिलक्स न्यूयोर्कको साम डेलिले कलर फिनिशिंगको साथ।
सँगै हेलर र लाइप्सले इन-क्यामेरा प्रविधिको माध्यमबाट फिचरको लेट एक्सएनयूएमएक्स फिल्म सौंदर्य प्रतिलिपि गर्न काम गरे। विभिन्न फिल्म र डिजिटल क्यामेरा विकल्पहरूको परीक्षण पछि, उत्पादनले सुपर एक्सएनयूएमएक्स मोडमा एआरआई एलेक्सा क्यामेराको साथ फुटेजको बहुमत शूट गर्ने छनोट गर्‍यो। अझ ठीकसँग "मिस्टर रोजर्स 'नेबरहुडको दृश्य प्रतिनिधित्व गर्न," लाइप्स' टीमले विश्वको समान संस्करणका कार्यहरूका लागि खोज्यो। Ikegami भिडियो क्यामेरा कि शो टेप गर्न प्रयोग गरियो। सत्यताको लागि त्यस्तै खोजीमा, डेलेले आफुलाई "मिस्टर रोजर्स 'नेबरहुड" को परिप्रेक्षमा पुरानो एपिसोडहरू हेरेर, पिट्सबर्ग संग्रहालयमा समेत गए जुन शोको मूल सेट राखिएको थियो। उनले फिचरको समग्र रूप सूचित गर्न मद्दतको लागि समय अवधिको सामान्य चलचित्र शैलीहरू पनि अनुसन्धान गरे।
"समावेशी Ikegami पाइपलाइनमा भिडियो फुटेज यस चलचित्रको र color्गको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष थियो, र हामीले भिडियो रेकर्डिंगको गुणवत्ता नाटकीय वातावरणमा पर्नेछ भनेर सुनिश्चित गर्न पर्याप्त परीक्षण गरेका थियौं, "डेलिले वर्णन गरिन्। “जुडी र मैले दस वर्षभन्दा बढी समय सँगै मिलेर काम गरिरहेका छौं; हामी सौन्दर्य हिसाबले इन सिnc्कमा छौँ र हामी दुबै जोखिमले जोखिम लिन सक्ने कुरामा लिन चाहन्छौं, र यो चलचित्र कुनै फरक छैन। "
र finish फिनिश प्रक्रियामार्फत, डेलिले अन्तिम फुटेज एकीकृत गर्न र पोलिश गर्न मद्दत गर्‍यो, जसमा PAL र NTSC भिडियो एलेक्सा-अधिग्रहीत डिजिटल सामग्रीको अलावा थियो। उनले बिभिन्न भिडियो मापदण्ड र फ्रेम दरहरू एकीकृत गर्न ध्यान दिएका थिए जबकि कथा प्रतिबिम्बित गर्न दुई फरक देखिने आकारहरू पनि। आशावादी रोजर्स र उसको र colorful्गीन संसारको बिच भिन्नताका लागि, डेलिले निराशावादी जुन्रोडको वरिपरि एक शान्त मूडी महसुस गरे, फिल्ममा "लोयड भोगल" नाम गरेको र म्याथ्यु रिले खेलेको।
"छिमेकीको सुन्दर दिन" मा अधिक जानकारीको लागि, कृपया भ्रमण गर्नुहोस्: www.abe museday.movie/.
EFILM को मिच पाल्सन वेंचर्स "जमानजी: अर्को स्तर" मा जंगल पछाडि - डिसेम्बर 13, 2019
ताइवानमा आधारित किंग कम्युनिकेसन मेडिकल ट्रेनिंग र एडभान्समेन्टको लागि कार्डियोलोजी प्रक्रिया प्रसारण गर्न एजेए गियरलाई ट्याप गर्दछ - डिसेम्बर 12, 2019
लिन्डसे एलिजाबेथ डोनोभन एन्कोोर भ्याकूवरलाई बिक्रीका उपाध्यक्षका रूपमा सामेल छिन् - डिसेम्बर 11, 2019
प्रसारण - सामाजिक मेगाडा सम्पादन ग्यामर चापमैनलाई सम्मानित SJGolden - स्पियर र तीरहरू कोलोरी कोलोरी - समाचार कोलोनी / शिकागो	2019-11-25
अघिल्लो: राइजिंग सन पिक्चर्सले "फोर्ड v फेरारी" को लागि एक ऑटो रेसिon प्रतिमा पुनर्निर्माण गर्दछ।
अर्को: ध्वनि लाउन्ज पोडकास्ट सेवा प्रस्तुत गर्दछ